Tiorkia, ‘pop star’ ela nihetezana, misedra famotopotorana noho ny tononkirany · Global Voices teny Malagasy
Kintan'ny mozika miatrika valinkafatra noho ny hira iray navoakany tamin'ny 2017
Voadika ny 23 Janoary 2022 7:52 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, srpski, Español, English
“Music Note Bokeh” avy amin’izato lanitra manga tanteraka sarotra inoana, nampiasàna ny lisansa CC BY-NC-SA 2.0
Nanomboka tamin'ny 2017 ilay “Zavatra iray mahafinaritra mila iainana ity” nosoratan'ilay kintan'ny mozika tiorka, Sezen Aksu. Taona dimy aty aoriana, nizara ny lahatsarin'io hira io ihany tamin'ny alàlan'ny fantsony YouTube i Aksu talohan'ny nankalazàna ny Taombaovao. Nisy hafatra iray ho an'ireo mpankafy azy nalefan'i Aksu nampiarahana tamin'ilay lahatsary, nirary Taona iray anjakan'ny maha-olombelona, ny fahalalahana ary ny firaisankina. Tsy nahalàla mihitsy, na kely aza, ilay mpihira, fa hoe vetivety foana dia hitondra azy hiatrika onjam-panakianana ny tonon'ilay hira sy ny toetrany. Noho ny fehezanteny iray ao anatin'ny hirany mivaky hoe “Arahaba atolotro an'i Adama sy Eva bado”, ampangaina ho mampietry ny lanjan'ny finoana i Aksu.
Miatrika fitoriana mahakasika ady heloka ilay ramatoa mpanoratra sady mpihira, 67 taona, ary iharan'ny fampielezankevitra feno fankahalàna ety anaty tambajotra izay nameno ny habaky ny Twitter tiorka tamin'ny tenifototra #SezenAksuHaddiniBil (#SezenAksuKnowYourPlace). Ny 17 Janoary, nisy andian-dehilahy nikarakara hetsika fanoherana teo ivelan'ny trano fonenan'ilay mpihira.
Mpikambana iray ao anatin'ny antoko eo amin'ny fitondrana” Rariny sy Fampandrosoana (AK)” no sady parlemantera ihany koa, Mustafa Açıkgöz nibitsika hoe:
Ampy izay! Fotoana izao hampitsaharanao ny famelezanao ny soatoavinay sarontsaronanao amin'ny zavakanto sy ny mozika, “Lany Daty Ianao”, leo olona tahaka anao ny fiarahamoninay! #SezenAksuHaddiniBil
Nanaraka ny diany ireo hafa mpanao lalàna. Mibaribary be “ny fahantrana sy ny habadoan'ilay mpihira tsy tomponandraikitra, niantso ny Mpaminany Adem sy Hava ho ‘bado’ any anatin'ny tononkira hafahafa nosoratany,” hoy ilay mpitarika ny antoko Hetsika Nasiônalitsa (MHP) Devlet Bahçeli, nandritra ny fihaonana nataona andiana parlemantera tamin'ny 18 Janoary. Ny MHP dia isan'ny fiaraha-mitantana iarahana amin'ny antoko AK eo amin'ny fitondràna.
Mandritra izany fotoana izany, namoaka fanambaràna iray ny Fitantanana ny Raharaha Ara-Pinoana (Diyanet). Na tsy manondro mivantana ny anaran'i Aksu aza izy, ny teny fampidirana amin'ilay fanambaràna dia mazava be fa i Aksu sy ny hirany no tondroiny.
Ny toetra tsy misy firaharahiana manoloana ireo oloben'ny finoana dia mariky ny tsy fisian'ny fanajàna. Tsy idirana izay tanjony, izay tiany hahatongavana sy ny vanimpotoana namoahana azy, fa ilaina ny mahatsapa tsara sy mitandrina amin'ny fehezanteny tsirairay, ny fanambaràna sy ny fomba itondrana azy natao momba ireo olona manana ny hajany, mpitarika ary fakan-tàhaka ao anatin'ny finoana Silamo.
Raha nisafidy ny tsy hanao fanambaràna ho an'ny daholobe i Aksu taorian'ireo fanenjehana, ireo pôlitisiàna kosa, hatramin'ireo artista, dia tonga nanohana azy.
Ny Ben'ny Tanànan'i Istanbul, Ekrem İmamoğlu nibitsika hoe,
Artista iray, miteny. Ireo artista no feo avy amin'ny aty lalin'ity firenena ity. Na izay aza, tsy misy manana zo hampangiana ireny feo ireny mba hanovàna ny fandaharam-potoanan'ny fanjakàna.
Ali Babacan, mpikambana fahiny tao amin'ny AKP, ary Lehiben'ny antoko DVA, nibitsika hoe:
Tsy afaka ny hisandratra i Tiorkia raha tsy ao ambonin'ny kianjan'ny fahalalahana mihevitra sy maneho hevitra. Tokony halalaka ihany koa ireo artistantsika rehefa maneho ny kantony. Ny toetsaina iray mandika vilana ireo tonony no hany manome tolotra ratsy ho an'ity firenena ity. Tsy azo ekena ny fanaovana an'i #SezenAksu ho lasibatra.
Elif Shafak, mpanoratra, nanatevina laharana ny fiarovana azy, tamin'ny fibitsihana hoe, “Lasa fiarahamonina iray tsy manao afa-tsy ny mandreraka ny artista ao aminy isika, amin'ny fanompàna, fanaovana fitsaram-bahoaka ary fanaratsiana azy ireny […] Tena mora be ny manenjika olona. #SezenAksu dia iray amin'ireo artista tena sarobidy ho an'ity firenena ity. Ireo hirany sy ny feony dia tafiditra hatrany anatin'ny fon'ireo andian-taranaka maro mifandimby #sezenaksuyalnızdeğildir (#SezenAksuIsNotAlone).”
Şanışer, mpiangaly gadona Rap ihany koa, dia nanandratra ny feony ho fanohanana an'i Aksu. “Raha tsy vitanareo ny manakatra izay vakianareo, aza mihaino an'i Sezen Aksu,” hoy ny nobitsihan'ilay artista, izay nanakoako tokoa tao Tiorkia tamin'ny 2019 ny hirany sangany #Susamam.
Tao anatin'ilay hafatra Taombaovao nozaran'i Aksu tao amin'ny Youtube, faniriany ny hoe mandritra ilay taona vaovao “ho tsapantsika ny herin'ny firaisankina, hifanampy ny tsirairay hitondra fanasitranana ireo ratra, hahamenatra antsika ny herisetra izay tsikelikely dia nanjary toy ny rano fisotrontsika[…] mba hiova, hanova, ary hitondra firosoana.” Taratra anatin'ireo onjam-panenjehana nahazo tato ho ato an'ilay ramatoa mpihira fa mbola ho lavitra ny dia, saingy mbola misy ny fanantenana, miaraka amin'ireo firaisankina rehetra sy ny fanohanana nipoitra.